Siciid Deni Oo Ka Hadlay Shirka Doorashada Somalia Ee Berri Muqdisho Ka Furmaya | Gaaroodi News
Siciid Deni Oo Ka Hadlay Shirka Doorashada Somalia Ee Berri Muqdisho Ka Furmaya
Wixii Deni u qabsoomay intii uu Muqdisho joogay
Labada madaxweyne ee maamul Goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ayaa ku sugan Muqdisho, waxayna labadoodaba dhaliileen dowladda Federaalka ee Soomaaliya.
Dhowr goor oo hore ayey ka baaqdeen shirar uu madaxweyne Farmaajo ku baaqay oo lagu dhameyn lahaa khilaafka doorashada.
Hadda Muddo toddobaad ah ayuu ku sugan yahay caasimadda Soomaaliya, halkaas oo kulamo uu kula yeeshay madaxda mucaaradka iyo siyaasiyiin kale.
Wuxuu yiri Deni: “Waxaan halkaan nimid ka dib markii aan marti qaad ka helnay beesha caalamka gaar ahaan James Swan iyo Yama Moto oo aad baryahaan ugu howshanaa sidii dhinacayada la isugu keeni lahaa ka dib markii uu dhammaaday muddo xileedkii hay’adaha dastuuriga ah ee Dowladda Federaalka.”
“Muddadii aan joognay waxaan wadahal la yeelanay beesha caalamka iyo dad badan oo Soomaali ah oo ay ugu muhiimsan yihiin madaxdii hore oo hadda ku mideysan Midowga Murashaxiinta.”
“Muddadii aan joognay dhinaca xukuumadda ma jirin cid nagala hadashay ma jirin waxayna u muuqaaysay inaysan diyaar u ahayn imaansheheena.”
Maxay tahay sababta ay uga qeyb galeyn shirka uu madaxweyne Farmaajo ku dhawaaqay?
Madaxweyne Dani oo ay BBC-da weydiisay in shirka Berri la sheegay inuu dhacayo lagu casuumay amaba ay ka qeyb galayaan ayaa sheegay inay baraha bulshada ku arkeen warqadda laakin aysan warqad rasmi ah oo lagu casumay aysan jirin.
Qoraalka Codka,Dhageyso Wareysiga Siciid Cabdullaahi Deni
“Shirka berri furmayo ilaa hadda wax arsmi oo aan ognahay oo hadda u fadhino ma jirto, balse waxaa taas ka sii daran, maxaaba shir laga qeyb galaa meeshii aan u maleeynaynay inay aamin tahay oo ay Ammisom tiri anagaa amnigeeda sugeeyna oo ay Beesha Caalamka nagu casuntay ayaa xalay nalagu soo weeraray oo afarta dhinac ciidamo nagala dhigay, waxaana ciidamaasi u fasiranay inay la mid yihiin kuwii 19-kii Febaraayo weeray Ma’da.”
Dani ayaa sheegay inuu beesha Caalamka ugu baaqayo in dalka Soomaaliya uu u baahan yahay in la samata bixiyo. Waxa uu sheegay in arrimaha doorashada laga hadli karo oo keliya marka laga heshiiyo amniga iyo sida ciidamada Soomaaliya loo maamulayo.
“Nimankan sida loo tabaray aniga shaki weyn baa iga jira, marka wax naxariis ah oo ay leeyihiina ma jirto, dadka waxa xun looma sheego laakin waan qarsan waynay,” ayuu yiri isaga oo ka hadlaya ciidamadaas sida gaarka ah u tababaran